चेलीबेटी जोगाउने चिन्ता
Friday,6Apr, 2018 7:17 PM
अत्यधिक रूपमा बलात्कारका घटना किन भइरहेका छन् ? के–कस्ता कारणले यस्ता जघन्य र निन्दनीय अपराधतर्फ मानिसलाई उत्साहित बनाइरहेको छ ? यावत् प्रश्नको जवाफ खोज्नै पर्ने भएको छ । के सामाजिक सञ्जाल यसमा दोषी छन् ? या घटनालाई अतिरञ्जित पार्ने प्रवृत्तिको विकासले समाजमा यस्ता घटनाको बाढी नै आएको भान परेको हो ? कानुनको कमजोरीका कारण पो अपराधी निरुत्साहित नभएका हुन् कि !
अथवा, युुट्युबलगायत इन्टरनेटमा पाइने अनेकौं खाले साइटमा सहजै प्राप्त हुने अश्लील र यौनोत्तेजक सामग्रीको सहज पहुँचका कारण यस्तो मनोवृत्ति बढेको हो ? बलात्कार र त्यसपछि हत्याका घटना यति धेरै सार्वजनिक भइरहेका छन् कि हामी कतै बर्बर र जंगली (असभ्य) समाजमा त बसिरहेका छैनौं भन्ने भान हुन थालेको छ । जनताको जीउधन जोगाउनुपर्ने प्रहरीका जवानदेखि सेनाका हाकिमसम्म यस्तो अपराधमा संलग्न रहेको पाइन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नजिकैको छिमेकी वा नातेदार नै बलात्कारीको रूपमा प्रकट हुन थालेको छ ।
बलात्कारको सिकार हुनेमा ५ वर्षीयादेखि ६० वर्षीयासमेत हुनुले कतै एउटा विक्षिप्त मानसिक अवस्थामा पुगेका पुरुष जातहरूको समुदाय नै विकास भएको त होइन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । जे होस्, नेपाली समाजको नैतिक मूल्य–मान्यतामा धेरै नै ह्रास आएको पाइयो । सामुहिक बलात्कारका घटना सामान्य र आम बन्दै गएको समाजमा कस्ता बालबालिका हुर्कंदै छन् भनेर अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । एकाएक समाज कसरी यस्तो डरलाग्दो र अपत्यारिलो अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुराको सूक्ष्म अध्ययन र निराकरणका लागि उपयुक्त विधिको विकास गर्न ढिलो गरियो भने समाजमा छोरीचेली कहिल्यै सुरक्षित नहुने पक्का छ ।